प्रधानमन्त्रीलाई एपेन्डिसाइटिस, अपरेशनको तयारी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार १२:१३ English
प्रधानमन्त्रीलाई एपेन्डिसाइटिस, अपरेशनको तयारी
काठमाडौँ, १० मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एपेन्डिसाइटिस भएको छ । मंगलबार बिहान पेट दुखेर त्रिपव शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका उनलाई एपेन्डिसाइटिस देखिएपछि अस्पतालले उनको अपरेसनको तयारी गरेको हो ।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका डा. अरुण सायमीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अपरेशनको तयारी भईरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । उनले ४ पटक डायलायसिस गराइसकेका छन् ।
१० मंसिर २०७६, मंगलवार ११:०१ मा प्रकाशित